🥇 ▷ Galaxy Note 9 xusuusta iyo qiima dhimista: illaa 512 GB oo ah qiimo aan kaa yaabin doonin ✅
Galaxy Note 9 xusuusta iyo qiima dhimista: illaa 512 GB oo ah qiimo aan kaa yaabin doonin
Markii aan u soo dhowaanay soojeedinteedii rasmiga ahayd, waxaan barannaa faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan Galaxy Note 9. Maanta waa waqtigii aan ka takhalusi lahayn qaar ka mid ah xusuusta oo goysa iyo eedeynta iibinta qiimaha of top sare ee kala duwan oo ka mid ah Samsung.
Sida laga soo xigtay mid dhaw warbixinno shabaqa ayaa ku soo dhacay, Galaxy Note 9 ayaa sidoo kale lagu iibin doonaa noocyo kala duwan oo leh 512 GB xusuusta gudaha, sida qaar ka mid ah macluumaadka aan soo sheegnay ee horey u soo jeedinay. Cilmiga cusub waa in noocaan sidoo kale la iibiyaa Yurub qiimaha 1,250 €, midabbada Madoow waa buluug.
AKHRISO: Samsung Galaxy Note 8, dib u eegista
Nooca “heerkaQalabka wuxuu ka koobnaan doonaa mid lagama maarmaan ah 128 GB kaydinta gudaha (ee loogu talagalay Galaxy Note 8 waxay ahayd 64 GB mid ah), kaas oo laga filayo Yurub dhexdeeda qiimaha 1,050 €, midabbada Madoow, buluug waa Fudud.
Qiimaha iibka iyo midabada aan soo sheegnay waxay noqon doonaan qaas u ah suuqa Yurub iyo, in kasta oo aan lagu cayimin warbixinta, laakiin ma aragno sababaha ay sidoo kale aysan ugu tixraacin Suuqa Talyaani.
Dabcan, waxaan kugula talineynaa inaad qaadato macluumaadka ku taxan taxaddar macquul ah maxaa yeelay kama imminka hay’adaha rasmiga ah. Waan ku soo laaban doonnaa si aan cusboonaysiinno haddii faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan dareenkan ay soo baxaan.